Manohana ny vondrom-piarahamonina LGBT i Tim Cook taorian'ny fanafihana Orlando | Avy amin'ny mac aho
Tim Cook dia naneho ny fanohanany ny vondrom-piarahamonina LGBT taorian'ny fitifirana tany Orlando
Taona 2014 tamin'izay Tim Cook nanapa-kevitra ny hanokatra ny fiainany manokana amin'ny besinimaro mandritra ny fotoana fohy amin'ny alàlan'ny Bloomberg mankany manamafy ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy manohana ireo any Etazonia izay mbola mijaly ny matahotra mpampijaly any an-tsekoly, asa ary amin'ny fianakavian'ny tena.
Tao amin'ny fanambarana nataony, ny CEO an'ny Apple dia nilaza fa tsy mihevitra ny tenany ho mafana fo, fa tsapany kosa hoe ohatrinona no azony tombony tamin'ny lehibe ezaka nataon'ny vondrom-piarahamonina LGTB manohana ny fitoviana sy ny fampidirana ao amin'ny fiarahamonina. Taorian'ny zava-nitranga tany Orlando (Florida) Miteny indray i Tim Cook.
Na dia tsy nandà ny firaisana ara-nofo nataoko mihitsy aza aho dia mbola tsy nampahafantariko ampahibemaso izany. Ka hazavaiko tsara: reharehako ny maha pelaka ahy, ary heveriko fa ny pelaka dia iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ahy.
Toy izao no nitenenan'ny CEO an'ny Apple ny taona 2014 momba ny fiainany manokana, niaiky izy fa tsy nanao "tompon'andraikitra tao ivelan'ny arimoara", ary nanome toky fa tsy noheveriny ho ilaina ny fananana izany mandra-pahatsapany fa ny andraikitra manohana ny fiaraha-miasa ampahibemaso.
Ny fanohanan'i Tim Cook ho an'ny vondrom-piarahamonina LGTB
Ny faran'ny herinandro lasa teo, ny tantaran'i Etazonia dia voadona indray noho ny tsy rariny amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy. ny Lehilahy mitam-piadiana 29 taona niditra amina klioba malaza eto an-tanàna namono olona 50 ary namela maherin'ny 53 naratra.
Ity fanafihana ity dia nosokajian'ny governemanta ho fitifirana marobe ratsy indrindra amin'ny firaketana eo amin'ny tantaran'ny firenena, ary ny filoha Barak obama dia niteny mba hamaritana ny famonoana ho "asa fampihorohoroana sy fankahalana".
Ny fametrahana nentim-paharazana an'i Apple miaraka amin'ireo Amerikanina namany sy ny vondrona firenena nitarika an'i Tim Cook haneho ny azy fanampiana ny vondrom-piarahamonina LGTB avy amin'ny orinasa. Ity no fomba hijerentsika azy ao amin'ny skaonty Twitter ofisialinao.
Ny fonay dia mijaly amin'ireo niharan'ilay loza tsy hay lazaina tao #Orlando, ny fianakaviany sy izay rehetra miara-ory aminy.
- Tim Cook (@tim_cook) 12 junio 2016
Fanindroany ny tsy fandeferana no mitondra ny lohanteny manaitra indrindra eran'izao tontolo izao. Manantena izahay fa miaraka amin'ny fanohanan'ny orinasa lehibe, fikambanana sosialy ary fandeferana amin'ny olom-pirenena, nijanona ny fifandonana noho ny antony tsy misy ifandraisany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tim Cook dia naneho ny fanohanany ny vondrom-piarahamonina LGBT taorian'ny fitifirana tany Orlando
Ahoana ny fomba hamafana ireo backups TimeMachine